M-Media Blog Archives - Page 23 of 23 - News @ M-Media
ဟိုး……. လှောင်ချိုင့်ကြားက အသွေးနဲ့အသားနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ ချိုှးငှက်တွေ လေဟုန်မှာအတောင်ပံဖြန့်လို့ အားနဲ့မာန်နဲ့ သူတို့လဲ ပျံချင်ရှာနေမပေါ့ မေမေ …. ရင်နှစ်သည်းချာတွေနဲ့ သံတစ်တိုင်စာ ကွာဝေးရတဲ့ ဘ၀မှာ ဟိုး ဝေးဝေးက တောင်ပံ ခတ်သံတွေနဲ့ မပီဝိုးဝါးအိပ်မက်တွေက လေဆန်အရပ်က[Read More…]
January 4, 2012 — ကဗျာ
ပါပူအာ နယူးဂီနီ မှ ပထမဆုံးမွတ်စလင်မ်
ကျွန်တော့်နာမည်က လာဝီ အလီ ဝီရောပါ။ ပါပူအာ နယူးဂီနီ အလယ်ပိုင်း ပါပူအာ အရှေ့တောင်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းရှိ ဝိုင်အိုရီ ရွာကပါ။ အသက်၂၅ နှစ်ရှိပြီး အိမ်ထောင်နဲ့ပါ။ ဂျလာလွတ်ဒင် ဆိုပြီး သားတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်က ၁၉၈၆ ခုနှစ်[Read More…]
August 10, 2011 — အစ္စလာမ်အေးရိပ် ဆာယာသို့
သူတို့တွေလေ ငါတို့ကို လက်ညှိုးထိုး ယိုးစွပ်ခဲ့ကြပေါ့။ ဒိုင်းနမိုက်တွေ ရင်ဘတ်မှာ စည်းနှောင်ပြီး အဆောက်အအုံတွေ လေယာဉ်တွေကို ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီး… အရပ်သား ရာပေါင်းများစွာကို သေတွင်းထဲ ပို့. . . အဲဒီလိုလုပ်ရပ်တွေနဲ့ သွေးဆာနေတဲ့ အကြမ်းဖက်ဝါဒီတွေ …တဲ့[Read More…]
February 4, 2011 — ကဗျာ
အာဆီယံအထူးကိုယျစားလှယျ မွနျမာနိုငျငံကို ဒုတိယအကွိမျ ရောကျရှိ
တမနျတျောမိုဟာမကျကို စျောကားပွောဆိုမှုနောကျဆကျတှဲ အိန်ဒိယတှငျ တငျးမာမှု မွငျ့တကျ
အာဖဂနျရှိ ငလငျြဒဏျခံရသူမြား ကူးစကျရောဂါအန်တရာယျ ရှိနေ
နိုငျငံ၏ ဂုဏျသိက်ခာကိုဖျောကွူးသညျ့ မွဈကူးတံတားသဈကို ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ ဖှငျ့လှဈ
Categories Select Category Advertising (5) Dubai (2) EDITORIAL (14) English Version (45) M-Media Blog (113) ကဗျာ (77) အစ္စလာမ်အေးရိပ် ဆာယာသို့ (18) M-Media Movies Guide (2) M-Media စာအုပ်စင် (23) M-MediaNewsLetters (15) Media To Monitor (116) Hate Crime စောင့်ကြည့်ရေး (26) ပြည်တွင်း (26) Our Perspectives (95) Uncategorized (2) ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများနှင့် ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ (19) ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးပညာ (542) ထင်ပေါ်ကျော်ကြား ပုဂ္ဂိုလ်များ (210) ထူးချွန်လူငယ် (16) ရဲဘော်ကိုထွေး (6) ဦးရာဇတ် (23) ပညာရေး (91) မိုးလေ၀သ (4) ရင်ဖွင့်လွှာ (3) သတင်းများ (18,422) Analysis (7) Interview (146) Weekly News (2) ကမ္ဘာ့မွတ်စလင် သတင်းများ (1,634) ကာတွန်း (50) ဓါတ်ပုံသတင်း (92) ရုပ်သံသတင်း (62) သတင်းသုံးသပ်ချက် (2) သတင်းဆောင်းပါး (136) သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ (574) သူ့အမြင် (220) အားကစား (2,719) ဆောင်းပါးရှင် အာဘော် (18) ပြည်သူ့အသံ (23) မြန်မာသတင်း (4,506) နိုင်ငံတကာသတင်း (9,591) အာဖရိက (494) အာရှ-ပဖိဖိတ် (3,218) အမေရိက (1,102) အရှေ့အလယ်ပိုင်း (2,295) ဥရောပ (1,086) သုတ၊ရသနှင့်အထွေထွေ (1,391) Essay (1) M-Media Knowledge (35) Quote (16) ကမ္ဘာကျော် မွတ်စလင်များ (128) ကမ္ဘာကျော်မွတ်စလင် အားကစားသမားများ (30) ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ် (6) စာတမ်း (5) ဘာသာပြန် (161) ရသစာပေ (4) ဝတ္ထုတို (6) သုတ၊ရသ (57) သရော်စာ (29) ဆောင်းပါး (870) ထွေရာလေးပါး (84) ပေးစာ/ပြန်စာကဏ္ဍ (26) ကြေငြာချက် (59) နှလုံးသားအာဟာရ (29) သူတို့ပြောသမျှ သူတို့အကြောင်း (2) အမှားပြင်ဆင်ချက် (2) အနုပညာ (2) မြန်မာမွတ်စ်လင်မ်သမိုင်း (52) Kaman (1) Masjid In Myanmar (1) သမိုင်းထဲက ပုံရိပ် (17)
Archives Select Month June 2022 (24) May 2022 (49) April 2022 (38) March 2022 (68) February 2022 (54) January 2022 (49) December 2021 (79) November 2021 (68) October 2021 (59) September 2021 (67) August 2021 (68) July 2021 (61) June 2021 (74) May 2021 (64) April 2021 (77) March 2021 (62) February 2021 (60) January 2021 (79) December 2020 (99) November 2020 (48) October 2020 (65) September 2020 (79) August 2020 (56) July 2020 (59) June 2020 (63) May 2020 (71) April 2020 (91) March 2020 (77) February 2020 (84) January 2020 (88) December 2019 (70) November 2019 (71) October 2019 (89) September 2019 (81) August 2019 (67) July 2019 (88) June 2019 (75) May 2019 (85) April 2019 (85) March 2019 (76) February 2019 (99) January 2019 (78) December 2018 (76) November 2018 (77) October 2018 (128) September 2018 (122) August 2018 (126) July 2018 (155) June 2018 (119) May 2018 (151) April 2018 (156) March 2018 (141) February 2018 (125) January 2018 (131) December 2017 (148) November 2017 (162) October 2017 (215) September 2017 (200) August 2017 (210) July 2017 (209) June 2017 (201) May 2017 (196) April 2017 (205) March 2017 (203) February 2017 (211) January 2017 (245) December 2016 (235) November 2016 (276) October 2016 (265) September 2016 (244) August 2016 (252) July 2016 (242) June 2016 (290) May 2016 (242) April 2016 (254) March 2016 (283) February 2016 (284) January 2016 (329) December 2015 (341) November 2015 (358) October 2015 (417) September 2015 (303) August 2015 (277) July 2015 (268) June 2015 (293) May 2015 (302) April 2015 (238) March 2015 (266) February 2015 (260) January 2015 (282) December 2014 (262) November 2014 (255) October 2014 (273) September 2014 (226) August 2014 (233) July 2014 (246) June 2014 (217) May 2014 (249) April 2014 (280) March 2014 (264) February 2014 (255) January 2014 (326) December 2013 (291) November 2013 (257) October 2013 (255) September 2013 (203) August 2013 (233) July 2013 (233) June 2013 (206) May 2013 (172) April 2013 (114) March 2013 (153) February 2013 (70) January 2013 (96) December 2012 (101) November 2012 (130) October 2012 (168) September 2012 (82) August 2012 (118) July 2012 (93) June 2012 (76) May 2012 (53) April 2012 (31) March 2012 (24) February 2012 (8) January 2012 (13) December 2011 (19) November 2011 (10) October 2011 (11) September 2011 (12) August 2011 (33) July 2011 (28) June 2011 (7) May 2011 (15) April 2011 (9) March 2011 (8) February 2011 (12) January 2011 (15) December 2010 (16) November 2010 (21) October 2010 (29) September 2010 (30) August 2010 (4)